Roost-iNdawo eLulelekileyo yelali, iNdawo yelali
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguWill And Giles
IRoost yenye yendlu yangasese enobubele entliziyweni yeHawkshead ebukekayo, konke okuluncedo kunye nezinto eziluncedo zelali kodwa indawo kunye nemibono yelali; yenza le ibe yindawo entle yokuhlala. Ngaphakathi nangaphandle, le yindawo yokonwabela, yokonwabisa kwaye uphumle ukusuka kwindawo enkulu evulekileyo yokuhlala ukuya kwigumbi lemidlalo kunye negadi ejonge emazantsi, luyolo lonyaka wonke. Ilungele iintsapho okanye amaqela amancinci, I Roost ilala ezintandathu ngapha kwe-3 eyilwe ngobuchule, amagumbi okulala abanzi.
I-cottage yindlu ejonge ezantsi kuba isicwangciso esivulekileyo sokuhlala sithe saa kumgangatho wokuqala ukuze sithathe ukukhanya kunye neembono ezilungileyo zelali kunye neenduli ngelixa amagumbi okulala esasazeke ngokulinganayo kumgangatho ophantsi.
Ikhitshi kunye nendawo yokuhlala:
Ukusuka kwigadi ephambi kwendlu ukuya kwizitepsi ezibanzi, ungena kwindawo yokuhlala, enesilingi eziphakamileyo kunye neefestile kumacala amathathu. Apha ungaphumla nakweyiphi na kwiisofa zesikhumba zodidi oluphezulu, sisithuba esihle sosapho okanye esokubambana kwaye uthathe iimbono okanye ubukele imuvi kwi-smart 48’’ TV.
Ukuhamba uye kwi-cottage ufika ngokulandelayo kwindawo yokutyela, enegumbi elijikeleze itafile ye-oki isibhozo osonwabisayo, kwaye kwiinyanga zasebusika ukuze ufumane i-cosiness eyongezelelweyo equkuqela kuyo yonke i-cottage, kutheni ubusuku bukhanyisa isitshisi seenkuni. Ngoko nangoko kwigumbi lokutyela yimeko yekhitshi lobugcisa elinesitovu sokungeniswa, i-oveni ephakanyisiweyo kunye nazo zonke izixhobo onokuthi uzifune ukwenza yonke into ukusuka kwikomityi yeti ukuya kwirosti epheleleyo ngeCawa- kuluvuyo ukupheka.
Igumbi lokugqibela kumgangatho wokuqala ligumbi lokuhlambela elitsha elinobunewunewu, elinendlu yangasese kunye nebhafu ekhululekileyo, ilungele ixesha lokuhlambela abantwana okanye ukukhulula kunye nokwenza lula imisipha yakho emva kosuku lokuphonononga.
Ngaphantsi kwegumbi lokuhlala kukho amagumbi okulala amathathu amakhulu, ngalinye lineempawu zalo. Ngaphandle kokuba kumgangatho ophantsi, la magumbi alula kwaye abanzi ngokuqwalasela ngokucophelela iinkcukacha kuyilo kunye nokukhanyisa.
Igumbi 'loKumkani' ligumbi elibanzi eliphindwe kabini elinemibono eya ngasecaweni. Inebhedi elingana nenkosi, ihonjiswe ngobumnandi ngefanitshala encinci kunye neTV enkulu, ilungele iintsasa ezinobuvila.
Igumbi 'loKumkanikazi' likwabonisa ibhedi ephindwe kabini, isihlalo sefestile kunye nesithuba esaneleyo sokuba isibini okanye umntu onethamsanqa akonwabele.
Igumbi le-'Jack' lineebhedi ezimbini zomntu omnye, libanzi, likhululekile kwaye lincinci liyenza ilungele yonke iminyaka ukuba yonwabe.
Umgangatho ongaphantsi kwakhona unendlu yangasese kunye neshawari yokuhamba-hamba kunye neveranda encinci eneendawo zokuhlambela.
Kuyayonwabisa indawo enjalo yelali, iRoost inokhetho oluninzi lwangaphandle. I-driveway yokutshayela inqumla iibhedi zeentyatyambo ezimisiweyo, i-lawn ejikelezayo kunye ne-patio enkulu efikelela kwi-garage-cum-games room.
Ipatio ejonge emazantsi ibamba ilanga imini yonke, ilungile kwisidlo se-al-fresco, ii-BBQs okanye ukutshiswa lilanga nje (xa imozulu ivuma). Kwangoko phambi kwendlwana kukho ingca, ilungele ukuba izinja kunye nabantwana bahlawule ngokufanayo; uya kufumana iseti yethu ye-croquet yindlela entle yokudlula ubusuku obuhle apha. Ukusuka apha kukho iimbono ezinomtsalane zepanorama ezisingise eLatterbarrow, Grizedale kunye namaphandle ajikelezileyo.
Ukongeza kwi-cottage ephambili, kukho negumbi lemidlalo elinendawo encinci yekhitshi, indlu yangasese kunye netafile yokubhukuda. Kuhle ukugcina intsapho yonwatyiswa ngosuku olumanzi okanye ngokuhlwa kwasebusika; vumela abantwana badlale okanye babambe itumente yepool xa abancinci beye kulala!
Sifuna ukukhuthaza ukhenketho oluzinzileyo ngexesha le-coronavirus ukwenza okona kulungileyo kwiindwendwe, abantu basekhaya kunye nabacoci bethu:
-Iqela lethu lokucoca lifumene uqeqesho malunga neendlela ezihlaziyiweyo zokusebenza, iimveliso zokucoca kunye neenkqubo zokucoca eziphuculweyo zokuqinisekisa ukuba indlu iyindawo ekhuselekileyo kuwe.
-Senze ukuba imiqathango yethu yokubhukisha ibe bhetyebhetye kunye nembuyekezo epheleleyo efumanekayo de kube ziintsuku ezi-5 phambi kokufika.
- Sinikela nge-£ 5 kuzo zonke iindawo zokuhlala kwi-Fix the Fells ukunceda ukulungisa nokugcina iindlela ze-330 ezinyukayo, zinceda ukugcina iSithili saseLake siyindawo ekhethekileyo.
50" HDTV ene-I-Disney+, I-Netflix
Ifakwe kwilali entle yaseHawkshead edume ngonxibelelwano lwayo loncwadi noWilliam Wordsworth kunye noBeatrix Potter. IRoost ikwiNduli yeChurch, phezulu nje ukusuka kwiMain Square naphantsi kwejongo leGothic iSt Michaels kunye neCawe yeeNgelosi zonke.
Ilali inayo yonke into onokuyidinga ngokuhlala kwakho kunye namashishini amaninzi azimeleyo enza iHawkshead ibe ngumzobo omkhulu kubandakanya:
Ii-pubs ezine ezibonelela ngeentlobo ngeentlobo zokutya neziselo ezineendawo ezingaphandle nazo.
Inani leekhefi, singasathethi ke ngeKittchen; ikati cafe kuphela Cumbria.
Iivenkile ezizodwa ezithengisa izipho, iimpahla zangaphandle, iimveliso zobugcisa, i-ayisikrimu kunye netshokolethi.
Zonke ezi zinto ziluncedo yimizuzu nje embalwa yokuhamba, ke nokuba ufuna ubisi kunye nephepha kusasa okanye uneebhiya ezimbalwa ngolwesihlanu ngokuhlwa, ayisoze iphume endleleni. Nangona kunjalo, i-Roost ijonge ngaphandle kwelali isiya emaphandleni ajikelezileyo kunye neenduli, okuthetha ukuba ukusuka kwindlu encinci ungajonga ngokulula ngeenyawo okanye ngebhayisekile indawo entle yendawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Will And Giles
Ukufikelela kuyo yonke ipropathi, kubandakanywa negadi engqongileyo. Nangona singekho ngokwasemzimbeni, ngalo lonke ixesha lokuhlala siyaqhagamshelwa ngeengcebiso, ukusonjululwa kwengxaki njalo njalo. Sikwabonelela ngenombolo kaxakeka, yomhlobo wasekuhlaleni ukuba iyafuneka.
Ukufikelela kuyo yonke ipropathi, kubandakanywa negadi engqongileyo. Nangona singekho ngokwasemzimbeni, ngalo lonke ixesha lokuhlala siyaqhagamshelwa ngeengcebiso, ukusonjululwa kw…
UWill And Giles yi-Superhost
Iilwimi: Français, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hawkshead